Mushaar la’aanta ciida | Baydhabo Online
Ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa soo baneeyay furimihii dagaalka qaar, halkaas oo la sheegay in meelaha qaar ay la wareegeen dagalaamayaasha Alshabaab.
Muuqaalo laga soo duubay ciidanka oo laga baahiyay warbaahinta maxaliga ah iyo muuqaalo kale oo aad loogu faafiyay baraha bulshada, ayaa muujinaya ciidamo xiran dareeska militariga oo ka cabanaya mushaar la’aan muddo afar bilood ah.
Mid ka mid ah askarta la waraystay ayaa sidan yiri “In aan afar bilood mushaar iyo garaam qaadanin, taas waxay na gayaysiinaysaa in aan dadka dhacno”.
Arrinyan cabashada mushaarka waxa ay taagantahay muddo todobaad ku dhow, waxayna kaliftay in madaxda ciidanka iyo kuwa ugu sareeya dowladda ay ka jawaabaan.
Goobaha ay soo baneeyeen ciidamada waxaa ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose iyo Shabeelada Dhexe, halkaas oo ay isku hor fadhiyeen ururka Alshabaab.
Xaaladda ayaa shalay faraha kasii baxday kadib markii ciidan tiro badan oo difaacyo kaga jiray Jowhar dusheeda ay yimaadeen magaalada Balcad oo 30 km u jirta magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay arrintan ayaa ku adkaysanaysa in ciidamada ay helaan mushaarkooda iyo xuquuqahoodii kale.
Taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya Jeneraal Indho Qarshe ayaa sidan yiri “Nin kasta oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan, meesha uu joogo ee loogu talogalay, laguna tirakoobay ayuu xuquuqdiisa ku helayaa, wax kasoo haray waxay yihiin, ciddii kale ee goobahaas ka maqan, iyadaa iskeed u maqan, shuruudahana ma buuxiso”.
Sidaasi oo ay tahay dowladda waxa ay Balcad u dirtay xubno ka tirsan golaha wasiirada si ay ula soo hadlaan ciidanka gadoodka sameeyay. Lama oga waxa ay kala soo kulmeen.
Haseyeeshee Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre oo la hadlayay saraakiil ciidan ayaanan hadalkaba dhexda dhigin, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “Dowladda Soomaaliyeed ma ahan mashruucii cayrta, ciidankana waa meeshii ugu dambeysay ee uu dhaqankaasi ka dhici lahaa, maalmahan waxaa la lahaa ciidamo ayaanan mushaarkooda qaadan, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto, inta ay ka maqantahayna waa inta aan la diiwaangalinin”.
Marka laga hadlayo habacsanaanta arrimaha amniga oo ay qeyb ka tahay ciidanka soo banaynaya fariisimahooda, waxaa farta lagu godayaa dowladda lafteeda.
Mac-hadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage oo qoraal kasoo saaray 2 sanno kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay iyo wixii u qabsoomay ayaa sheegay in dowladda ay hawlgab ka dhigtay guddigii amniga Qaranka.
Waxaa kale oo qoraalka Heritage lagu sheegay in gebi ahaanba dowladda ay meel iska dhigtay qorshihii isku dhafka ciidanka ee lagu soo meelmariyay shirkii London, islamarkaasna ay geeska galisay dowlad goboleedyada oo kaalin weyn ku lahaa arrimaha amniga.
Dowladda waxa ay aad isugu dayaysaa in ay samayso tirakoob kama dambeys ah oo ciidanka yeeshaan, qorshuhuna waxa uu yahay in askari kasta sanduuq bangi looga sameeyo Bangiga Dhexe, halkaas oo mushaarkiisa loogu soo shubo.
Warbixin ay dowladda diyaarisay oo ay BBC-da illo lagu kalsoonyahay ka ogaatay ayaa muujinaysa in askarta ciidanka xoogga dalka u diiwaan gashnaa ay ahayd 25 kun oo askari, balse markii baaritaan rasmi ah la sameeyay, oo madax ka tiris ah la ogaaday in tirada rasmiga ah ay tahay 16 kun oo askari.
Lama oga halka ay ka yimaadeen 9-kun ee dheeraadka ah, balse bishii Diseembar 2017-kii, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay joojinayso saanaddii raashinka iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka SNA ee Soomaaliya kadib markii la ogaaday musuqmaasuq baahsan oo ciidanka ka dhexjira.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xiligaas tabisay in saraakiil kormeer ah oo Maraykan ah ay tageen 9 ka mid ah xerooyinka ciidanka, balse ay arkeen wax ay la yaabeen.
“Maynaan arag wixii aan filanaynay, ma jirin wax caddeymo ah oo noo muujin karay in xaddiga raashiinka aan bixino meelahan lagu isticmaalo marka laga reebo labo xero, mid ka mid ah xerooyinka waxaan ugu tagnay shan meeloodoow meel ka mid ah askartii ay ahayd in ay meesha joogaan ayaan ugu tagnay, xero kalena oo la rabay in ay joogaan 550 askari waxaan ugu tagnay 160 askari oo kaliya” ayaa lagu yiri qoraal ay diyaarisay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters oo la faafiyay 2017-kii.
Wararka ay BBC-da heshay waxa ay sheegayaan in shaqadii laga joojiyay shirkadda Kashram ee raashiinka ciidanka qandaraaska ku haystay.
Arrinta diiwaangalinta elektarooniga ah (biometric) waxa loo yaqaano waxa uu meesha ka saarayaa lacag $3.5 milyan oo bil kasta Bangiga Dhexe gacanta uga dhiibi jiray taliyeyaasha ciidanka si ay mushaar ahaan ugu qeybiyaan ciidanka, sidaas waxaa lagu sheegay warbixinta ay dowladda diyaarisay.
Muddo aad u dheer ayay socotay hadal heynta nidaam xumada ciidanka ka dhex jirta, waana xaqiiqo dadka inta badan wada aqbalsanyihiin.
Waxaa sidaas si la mid ah la fahamsanyahay in ciidanka Soomaalida aysan wada helin xuquuqdooda muddo dheer, waxayse ku xirantahay hadba qofka aad la hadasho.
Balse xaqiiqda kama dambeysta ah waxaa la ogaan karaa si ka dheer shaki, marka ay dowladda federaalka si daahfurnaan ah usoo bandhigto xogta rasmiga ah ee ay hayso.
Waxayse dowladda u egtahay in ay qiranayso in ay jiraan ciidamo la diiwaangaliyay oo weli xaqiijin ku socoto iyo kuwa aan xeryahooda ku sugnayn oo aanan la diiwaangalinin “Waxaan ugu baaqayaa in taliyeyaasha ay xeryahooda ku diiwaangaliyaan askarta, kuna koontaroolaan” ayuu yiri Xassan Cali Kheyre.